Indasitiri nhau-Shenzhen SH-MBR Technology Co, Ltd
Kumwe Kusanzwisisana nezve MBR Maitiro ⑥
Membrane Bioreactor (MBR) mubatanidzwa weiyo membrane maitiro senge microfiltration kana ultrafiltration neyakagadziriswa sludge maitiro, ayo anokonzeresa mukuzadzikisa zvakanyanya zvakaderera zvikamu zvehupenyu mune yakarapwa mvura yakasviba. Membrane masystem anoshandura tsvina kuita yakajeka uye yemhando yepamusoro mvura. Tsoka diki yehunyanzvi hwekurapa inoita kuti masisitimu asanganiswe mune zvakasikwa, zvinoyevedza uye nekurapa mvura yakasviba yekushandisa yekudiridza. Iyo sludge goho mune MBR maitiro yakaderera kwazvo. Hunhu hwemvura yakasviba muMBR iri pamusoro peakajairika matsva eASP. Mvura inoyerera kubva kuMBR inogona kushandiswazve mukushandisa kwemaindasitiri mushure mekurapwa kweRO (Reverse Osmosis). MBRs dzinogona kushanda pakakwirira zvakanyanya MLSS (Mixed Liquor Suspended Solids) zvichienzaniswa neakajairwa ASP (Yakagadziriswa Sludge Maitiro).
Mutengo wakadii wemidziyo yekurapa tsvina?
Mutengo wakadii wemidziyo yekurapa tsvina? Ini ndinotenda kuti vatengi vazhinji vachabvunza uyu mubvunzo uye vari kunetsekana chaizvo nezve uyu mubvunzo. Ngatitarisei mamiriro chaiwo! Yakabatanidzwa michina yekurapa tsvina
Kumwe Kusanzwisisana nezve MBR Maitiro ⑤
Kumwe Kusanzwisisana nezve MBR Maitiro ④
Kumwe Kusanzwisisana nezve MBR Maitiro ③
Kumwe kusanzwisisa nezveMBR process ②